Yahya Jammeh iyo madaxda kale ee lagu eedeeyay in ay dheceen hanti - BBC News Somali
Image caption Jammeh ayaa looga shakisan yahay in uu dhacay hanti dad wayne
In kabadan 11 milyan ayaa la sheegay in laga la'yahay kaydka dawladda Gambia ka dib markii uu xilka ka dagay madaxwaynihii wakhtiga dheer xilka hayay Yaya Jammeh, kaas oo xilka ku sii dhaganaa ku dhawaad labo bilood inkastoo doorashada lagaga guulaystay bishii bishii Desembar.
Suharto, wuxuu ahaa madaxwaynaha dalka Indonesia 1967 ilaa 1998 waxaa lagu eedeeyay in uu xaday hanti dawladeed oo gaaraysa 35 bilyan oo doolar. Sanadkii 2000 waxaa lagu xukumay xabsi guri waxaana lagu soo oogay in uu xaday 570 milyan oo doolar isaga oo adeegsanaya hay'ado gargaar oon been abuur ah. Laakiin dhakhaatiirta maxkamadda ayaa sheegay in uu aad u xanuun san yahay oo uusan maxkamadayn awoodin, isla sanadkaas 2000 ayuuna geeriyooday.
Kabaha uu qof kaste xasuusto - Imelda oo ah xaaska Marcos ayaa kabaheeda lagu qiyaasay 3,000.